၂၀၁၈ ခုနှစ် အင်းလေး-ခေါင်တိုင် လူရည်ချွန်အပန်းဖြေစခန်းသိမ်းပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ ကျင်းပ
ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အင်းလေး-ခေါင်တိုင် လူရည်ချွန် အပန်းဖြေစခန်းသိမ်းပွဲကို မေ ၄ ရက် ည ၆ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး မြက်ခင်းပြင်၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ နမဝတန်းလူရည်ချွန် ကျောင်းသား/သူ လူငယ်မောင်မယ်များကို ဂုဏ်ပြုညစာ စားပွဲဖြင့် ဂုဏ်ပြုနိုင်ရေးနှင့် စခန်းသိမ်းပွဲအတွက် အဘက်ဘက်က ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြသူများအားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် အင်းလေး-ခေါင်တိုင်စခန်းကို လာရောက်ကြသည့် လူရည်ချွန် မောင်မယ်များ၊ ကြီးကြပ်ဆရာ/ဆရာမများကို ကြိုဆိုခြင်းနှင့်အစပြု၍ ယနေ့ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲနှင့် စခန်းသိမ်းပွဲတိုင်အောင် ကြားကာလ၏လုပ်ငန်းအသီးသီးမှာ စေတနာထားပြီး အဘက်ဘက်ကပြည့်စုံ အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသော တာဝန်ရှိသူအားလုံးကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ကိုယ်စား အထူကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း၊ ယခုလိုလူရည်ချွန်မောင်မယ်များကို ဂုဏ်ပြုသည့်ညစာစားပွဲတွင် ဘက်စုံဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ်ပြောကြားလိုကြောင်း၊ လူ၏ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံ၊ မျိုးရိုးဗီဇများသာမက နီးစပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်၊ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်စသည့် မောင်မယ်တို့၏ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုစေမှာဖြစ်၍လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင်ရသည်လည်း ရှိတတ်ပါကြောင်း ဘက်စုံဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Theory of Multiple Intelligences ဆိုတာရှိ၍ မြန်မာလိုမှာ ဘက်စုံဉာဏ်ရည်များနှင့်ပတ်သက်သော အယူအဆများ သီအိုရီဟုဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယုတ္တိဗေဒနှင့် သင်္ချာဉာဏ်ရည်ထူးချွန်သူသည် အခက်အခဲပြဿနာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာတတ်ကြ ပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုကို စူးစူးစိုက်စိုက်လေ့လာတတ်ကြကာ သိပ္ပံပညာ သင်္ချာပညာရပ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော နိယာမသဘောတရားများကို ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပုံကိုလည်း နားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြ ကြောင်း၊ လူရည်ချွန်မောင်မယ်များအနေဖြင့် အင်းလေး-ခေါင်တိုင်စခန်းကအစပြု၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာတတ်မှု၊ ကြည့်မြင်တတ်မှု၊ နက်နဲစွာပြန်လည်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြံစည်တတ်မှု၊ ပြန်လည်အသုံးချ တတ်မှုဆိုသည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို အလေးအထားဖြစ်သည်အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားသွားသည်။
. ဆက်လက်၍ လူရည်ချွန်မောင်မယ်များအား အမှတ်တရလက်ဆောင်များကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ အ.ထ.က (လားရှိုး)မှ မောင်ကောင်းဆက်လင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်၊ အ.ထ.က (ဧကရာဇ်)မှ မဆုမြတ်နှင်းတို့က လူရည်ချွန်မောင်မယ်များကိုယ်စား လက်ခံရယူပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ မှတ်သားမှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိသော ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်အောင်မြို့နယ်၊ အ.ထ.က (၁)မှ မမေစွမ်းဆင့်ရည်၊ ဒုတိယဆုရရှိသော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ စာပန်းအိမ် (က.ပ.က)မှ မောင်ဇော်ရဲထက်၊ တတိယဆုရရှိသော တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ အ.ထ.က မှ မောင်ခန့်ထည်မျိုးတို့အား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ညီညီအောင်က ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ စခန်းချကာလအတွင်း လေ့လာမှတ်သားမှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ အ.ထ.က(၂) မင်္ဂလာဒုံမှ မချိုချိုနှင်းအောင်၊ ဒုတိယဆုရရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လေ့ကျင့်ရေးအထက်တန်းကျောင်းမှ မဝင်းပြည့်ပြည့်ဇော်၊ တတိယဆုရရှိသော တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ အ.ထ.က (တနင်္သာရီ)မှ မောင်ခန့်ထည်မျိုးတို့အား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ဆုများချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ အ.ထ.က (၁)မြိတ်မှ မောင်လှဘုန်းဟန်က ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၏ တည့်ခင်းဧည့်ခံသော ညစာစားပွဲကို ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာ သုံးဆောင်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
၂၀၁၈ ခုနှဈ အငျးလေး-ခေါငျတိုငျ လူရညျခြှနျအပနျးဖွစေခနျးသိမျးပှဲနှငျ့ ဂုဏျပွုညစာစားပှဲ ကငျြးပ
ရှမျးပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ၏ ဂုဏျပွုညစာစားပှဲနှငျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ အငျးလေး-ခေါငျတိုငျ လူရညျခြှနျ အပနျးဖွစေခနျးသိမျးပှဲကို မေ ၄ ရကျ ည ၆ နာရီက တောငျကွီးမွို့၊ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရရုံး မွကျခငျးပွငျ၌ ကငျြးပကွောငျး သိရသညျ။
မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးမှ နမဝတနျးလူရညျခြှနျ ကြောငျးသား/သူ လူငယျမောငျမယျမြားကို ဂုဏျပွုညစာ စားပှဲဖွငျ့ ဂုဏျပွုနိုငျရေးနှငျ့ စခနျးသိမျးပှဲအတှကျ အဘကျဘကျက ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးခဲ့ကွသူမြားအားလုံး ကို ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျ အငျးလေး-ခေါငျတိုငျစခနျးကို လာရောကျကွသညျ့ လူရညျခြှနျ မောငျမယျမြား၊ ကွီးကွပျဆရာ/ဆရာမမြားကို ကွိုဆိုခွငျးနှငျ့အစပွု၍ ယနဂေု့ဏျပွုညစာစားပှဲနှငျ့ စခနျးသိမျးပှဲတိုငျအောငျ ကွားကာလ၏လုပျငနျးအသီးသီးမှာ စတေနာထားပွီး အဘကျဘကျကပွညျ့စုံ အောငျ ဆောငျရှကျပေးခဲ့ကွသော တာဝနျရှိသူအားလုံးကို ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၏ကိုယျစား အထူကြေးဇူး တငျရှိပါကွောငျး၊ ယခုလိုလူရညျခြှနျမောငျမယျမြားကို ဂုဏျပွုသညျ့ညစာစားပှဲတှငျ ဘကျစုံဉာဏျရညျ ဖှံ့ဖွိုးမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး အနညျးငယျပွောကွားလိုကွောငျး၊ လူ၏ဦးနှောကျဖှဲ့စညျးပုံ၊ ခန်ဓာဗဒေဖှဲ့စညျးပုံ၊ မြိုးရိုးဗီဇမြားသာမက နီးစပျမှုပတျဝနျးကငျြ၊ အစားအသောကျ၊ အနအေထိုငျစသညျ့ မောငျမယျတို့၏ ဉာဏျရညျဖှံ့ဖွိုးမှုကို အထောကျအကူပွုစမှောဖွဈ၍လကေ့ငျြ့ပွုစုပြိုးထောငျရသညျလညျး ရှိတတျပါကွောငျး ဘကျစုံဉာဏျရညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး Theory of Multiple Intelligences ဆိုတာရှိ၍ မွနျမာလိုမှာ ဘကျစုံဉာဏျရညျမြားနှငျ့ပတျသကျသော အယူအဆမြား သီအိုရီဟုဆိုရမှာဖွဈကွောငျး၊ ယုတ်တိဗဒေနှငျ့ သင်ျခြာဉာဏျရညျထူးခြှနျသူသညျ အခကျအခဲပွဿနာမြားကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာလလေ့ာတတျကွ ပွီး အကွောငျးအရာတဈခုကို စူးစူးစိုကျစိုကျလလေ့ာတတျကွကာ သိပ်ပံပညာ သင်ျခြာပညာရပျမြားနှငျ့ ဆကျစပျနသေော နိယာမသဘောတရားမြားကို ကွောငျးကြိုးဆကျစပျပုံကိုလညျး နားလညျနိုငျစှမျးရှိကွ ကွောငျး၊ လူရညျခြှနျမောငျမယျမြားအနဖွေငျ့ အငျးလေး-ခေါငျတိုငျစခနျးကအစပွု၍ ပတျဝနျးကငျြကို လလေ့ာတတျမှု၊ ကွညျ့မွငျတတျမှု၊ နကျနဲစှာပွနျလညျစဉျးစားတှေးချေါကွံစညျတတျမှု၊ ပွနျလညျအသုံးခြ တတျမှုဆိုသညျ့ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးမြားကို အလေးအထားဖွဈသညျအထိ ဆောငျရှကျနိုငျကွရနျ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာလငျးထှဋျက ဂုဏျပွုအမှာစကားပွောကွားသှားသညျ။
. ဆကျလကျ၍ လူရညျခြှနျမောငျမယျမြားအား အမှတျတရလကျဆောငျမြားကို ရှမျးပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့၊ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျက ပေးအပျရာ ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး)၊ အ.ထ.က (လားရှိုး)မှ မောငျကောငျးဆကျလငျးနှငျ့ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ဆငျပေါငျဝဲမွို့နယျ၊ အ.ထ.က (ဧကရာဇျ)မှ မဆုမွတျနှငျးတို့က လူရညျခြှနျမောငျမယျမြားကိုယျစား လကျခံရယူပွီး၊ ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဆိုငျရာ မှတျသားမှုစှမျးရညျပွိုငျပှဲတှငျ ပထမဆုရရှိသော ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ မွနျအောငျမွို့နယျ၊ အ.ထ.က (၁)မှ မမစှေမျးဆငျ့ရညျ၊ ဒုတိယဆုရရှိသော မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ပွငျဦးလှငျမွို့နယျ၊ စာပနျးအိမျ (က.ပ.က)မှ မောငျဇျောရဲထကျ၊ တတိယဆုရရှိသော တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီမွို့နယျ၊ အ.ထ.က မှ မောငျခနျ့ထညျမြိုးတို့အား ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၊ ပွညျနယျသယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာ ညီညီအောငျက ဆုခြီးမွှငျ့ပေး၍လညျးကောငျး၊ စခနျးခကြာလအတှငျး လလေ့ာမှတျသားမှုစှမျးရညျပွိုငျပှဲတှငျ ပထမဆုရရှိသော ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျ၊ အ.ထ.က(၂) မင်ျဂလာဒုံမှ မခြိုခြိုနှငျးအောငျ၊ ဒုတိယဆုရရှိသော ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ကမာရှတျမွို့နယျ၊ လကေ့ငျြ့ရေးအထကျတနျးကြောငျးမှ မဝငျးပွညျ့ပွညျ့ဇျော၊ တတိယဆုရရှိသော တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ အ.ထ.က (တနင်ျသာရီ)မှ မောငျခနျ့ထညျမြိုးတို့အား ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၊ ပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာမြိုးထှနျးမှ ဆုမြားခြီးမွှငျ့ပေးခဲ့ပွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ အ.ထ.က (၁)မွိတျမှ မောငျလှဘုနျးဟနျက ကြေးဇူးတငျစကားပွနျလညျပွောကွားကာ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၊ ပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျ၏ တညျ့ခငျးဧညျ့ခံသော ညစာစားပှဲကို ပြျောရှငျဝမျးမွောကျစှာ သုံးဆောငျကွကွောငျး သိရှိရသညျ။